फोयेबे वेष्टन (डेली मेल युके)
सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान र प्रविधि अध्ययन गराइने : मुख्यमन्त्री राई
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशका १०० सामुदायिक विद्यालयलयमा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि विज्ञान र प्रविधि विषयको अध्यापन गराइने बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषदद्वारा शुक्रवार आयोजित दुईदिने प्रदेशस्तरीय
वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए सौर्यमण्डलको सबैभन्दा टाढाको वस्तु !
एक अमेरिकी खगोल वैज्ञानिकले आफूले सौर्यमण्डलको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा टाढाको वस्तु पत्ता लगाएको दावी गरेका छन् । अमेरिकाको वाशिंगटन डिसीमा रहेको कार्नेगी इन्स्टिच्युट फर साइन्सका वैज्ञानिक डा. स्कट सेफर्डले पत्ता लगाएको उक्त
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डीनमा प्रा. डा राना नियुक्त
काठमाडौँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डीन पदमा प्रा डा रेशमबहादुर राना नियुक्त भएका छन् । प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ अनुसार प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजेन्द्रराज वाग्लेले हालै प्रा डा रानालाई